Valorant ဆိုင်မှ ကျွန်တော်တို့ ပြန်လိုချင်တဲ့ လက်နက် Skin များ | Codashop Blog MM
Home Games Valorant ဆိုင...
Valorant ဆိုင်မှ ကျွန်တော်တို့ ပြန်လိုချင်တဲ့ လက်နက် Skin များ
VALORANT ရဲ့ စိတ်၀င်စားစရာအကောင်းဆုံးတွေထဲကတစ်ခုကတော့ သူတို့ရဲ့ အရမ်းမိုက်တဲ့သေနတ် ဒီဇိုင်းတွေဘဲဖြစ်ပါတယ်။ Dragon (Elderflame) နဲ့ Headshot လေးရလိုက်တာတို့ နဲ့ Sinhularity Arsenal က Black holes နဲ့ ရန်သူတွေတစ်ဖွဲ့လုံးကို ရှင်းလိုက်နိုင်တာတို့ကို တွေးကြည့်လိုက်ပါ။ ဒီ လှပတဲ့ဒီဇိုင်းတွေက ဂိမ်းကစားမှုကို နောက်တစ်ဆင့်ခေါ်သွားလို့ ကစားသူတွေများလာအောင်ဆွဲဆောင်ပေးပါတယ်။
VALORANT Points တွေကို အသုံးပြုပြီး VALORANT ဆိုင်ကနေ သေနတ် Skin တွေကို၀ယ်ယူလို့ရပါတယ်။ အကောင်းဆုံးတွေကို လိုချင်ရင်တော့ ငွေလေးနည်းနည်းပိုသုံးရမှာပါနော်။ Skin တွေကိုရဖို့က အရေးကြီးပင်မယ့် တစ်ချို့ Skin တွေက အလှည့်ကျထွက်တာဖြစ်ပြီး စျေးများတေ့ာ လူတိုင်းက ချက်ချင်းမရနိုင်ပါဘူး။
VALORANT Store Rotation
ပြန်ပြောပြရမယ်ဆိုရင်တော့ VALORANT ဆိုင်က ကဏ္ဏ ၂ ခုရှိပါတယ်။ Skin တွေ Card တွေ နဲ့ အခြားပစ္စည်းတွေပါတဲ့ Set လိုက်အစုံပါတဲ့ Featured Collection ကတော့ ၅ ရက် ကနေ ၁၂ ရက်တိုင်း အပြောင်းအလည်းရှိပါတယ်။ပြီးတော့ ကျပန်းလှည့် ရွေးချယ်ခံရတဲ့ Skin ၄ ခု ကို “Rotating” Offer အဖြစ် ၂၄ နာရီမှာ တစ်ကြိမ် အမြဲ အပြောင်းအလည်းရှိပါတယ်။ သင်က သေနတ်တစ်လက်ရဖို့ အသည်းအသန် ဖြစ်နေရင်တော့ အဲ့ Item ကိုရဖို့ ခဏခဏ ​သွားပြီးစောင့်ကြည့်ဖို့ လိုအပ်နိုင်ပါတယ်။
Throwback Wednesday Weapons
လက်နက်ဟောင်းတွေနဲ့ Bundle အချို့ကို ရံဖန်ရံခါ ပြန်ပြီးပြောသင့်တယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ ထင်ပါတယ်။ သူတို့ကို ဆိုင်မှာ ပြန်ပြီးရရှိစေတာက ကစားသမားတွေ လိုချင်တဲ့ ဒီဇိုင်းတွေကို ကိုင်နိုင်ဖို့ အခွင့်အရေးပေးတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ကစားသမားအသစ်တွေကို အရင်က ဖြန့်ချိခဲ့တဲ့ collection တွေကို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ အခွင့်အလမ်းပေးတာလဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကတော့ Riot နှင့် VALORANT အသိုင်းအဝိုင်းနှစ်ခုလုံးအတွက် ထောက်ခံမှုကို မြှင့်တင်ဖို့ နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
Elderflame (Bundle, most especially Operator!)
Winterwunderland (Particularly the Candy Cane Melee!)
BlastX (Particularly Spectre)
EGO by OneTap (Vandal)
သင့်အတွက် အလွန်မိုက်တဲ့ သေနတ် Skin တွေ၀ယ်ဖို့ Codashop နဲ့ VALORANT Points ကိုတွေဖြည့်ဖို့ မမေ့နဲ့အုန်းနော်။ ပိုမိုမြန်ဆန် စိတ်ချရတဲ့ ငွေဖြည့်တဲ့ အတွေ့အကြုံတွေနဲ့ ငွေပေးချေမှု အဆင်ပြေပြီး စိတ်မပူရဘဲ ဂိမ်းဆော့နိုင်ဖို့ကို အာမခံပါတယ်။
Previous articleလုံခြုံစွာ ဂိမ်းကစားမှု – ဂိမ်းကစားသူများ နှင့် မိဘများအတွက် လမ်းညွန်
Next articleFree Fire Skyler: ဘာလို့ သင့်အသင်းမှာ ဒီ Superstar ကို လိုအပ်တာလဲ?